တင့်ဇော်လွင် - ဒေါက်တာရောဘတ်ကော့ (Robert Koch) တံဆိပ်ခေါင်းများ
"ဒီတလတော့ ငါ့တူကြီးကို တီဘီ(TB) ဆိုတဲ့ အဆုတ်နာရောဂါအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြစရာတွေ ရှိတယ်ကွ"
" ဟာ လွဲပါစေ ဖယ်ပါစေ ဦးလေးရာ။ ကြားရတာနဲ့တင် နှလုံးတုန် ရင်တုန် ရှိလိုက်တာ၊ လန့်သွားတာပဲ"
" အေး မင်းလန့်မယ်ဆိုရင်လဲ လန့်စရာဘဲကွ။ တို့ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားတွေကို သေမင်းဆီ ပို့ခဲ့တဲ့ သေမင်းတမာန်ရောဂါကြီးတွေထဲမှာ တခု အပါအ၀င်ကွ။ Tuberculosis ဆိုတဲ့ TB အဆုတ်နာရောဂါကို တကမ္ဘာလုံးက ကြောက်နေဆဲဘဲကွ"
''အခုတော့ ကုလို့ရပြီမဟုတ်လား။ ဆေးတွေရှိပြီ မဟုတ်လား။ ဦးလေးက ဆရာဝန်ဆိုတော့ ပိုသိမှာပေါ့''
"ဆေးတွေ ရှိနေပြီ။ ဆေးတွေသောက်ရင်ပျောက်နပြီ။ ဒါပေမယ့် ခုထိဒုက္ခပေးနေတုန်း။ ကမ္ဘာကြီးပေါ်က ပျောက်ကွယ် မသွားဘူးကွ။ ကျောက်ရောဂါ (Small pox) ဆိုရင် အခုဒီကမ္ဘာကြီးမှာ လုံးဝမရှိတော့ဘူး။ ပျောက်သွားပြီ။ ကာကွယ်ဆေးနဲ့ နှိမ်နှင်းနိုင်တော့ Small Pox is now history ကွ။ 1979 ခုနှစ်ကတည်းက။ ဒါပေမဲ့ TB ကတော့ ကာကွယ်ဆေးမပေါ်သေးလေတော့။ အဲဒီပိုးကို ပထမဆုံးတွေရှိခဲ့တဲ့ ဂျာမန်ဆရာဝန် ရောဘတ်ကော့ (Robert Koch) နဲ့ပတ်သက်ပြီး ထုတ်တဲ့တံဆိပ်ခေါင်းတွေ အကြောင်းပါ။ အဲဒါတွေကို ပြောချင် ပြချင်လို့ပဲ။
ရောဘတ်ကော့က TB တင်မကပါဘူးကွာ။ အခြားရောဂါပိုးတွေလည်း သူကတွေ့ခဲ့တဲ့အပြင် ရောဂါ ပိုးမွှားပညာရပ်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ သီအိုရီတွေ၊ စည်းမျဉ်းတွေကိုလည်း ချမှတ်ပေးခဲ့သေးတယ်။ He was the founder of modern Bacteriology. အဲဒါကြောင့် 1905 ခုနှစ်မှာ ဆေးပညာမှာ နိုဗယ်ဆု ရခဲ့တယ်ကွ။"
“ ပိုးကိုတွေ့ရုံပဲတွေ့တာလား၊ မကုန်နိုင်ဘူးလား ဦးလေး”
“ TB ကို ကုတဲ့ဆေးက ပိုးကိုတွေ့ပြီး နှစ်ပေါင်း ၅၀ လောက်ကြာတော့မှ ရှာဖွေတွေ့ရှိတာကွ”
“ ပိုးကိုတွေ့တဲ့သူက တစ်ယောက်။ အဲဒီပိုးကို နိုင်အောင်သတ်တဲ့ဆေးကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသူက တစ်ယောက်။ အဲဒီလိုလား ဦးလေး”
"မှန်တယ်ကွ။ နှစ်ယောက်စလုံးပဲ ဆေးပညာ နိုဗယ်ဆုတွေ ရခဲ့ကြတယ်။ နှစ် ၅၀ လောက်တော့ ခြားတာ ပေါ့ကွာ။ ရောဘတ်ကော့ တွေ့ခဲ့တဲ့ပိုးတွေကတော့-
Anthrax ကိုဖြစ်စေတဲ့ပိုးကို (၁၈၇၇ ခုနှစ်မှာ)
TB ကိုဖြစ်စေတဲ့ပိုးကို (၁၈၈၂ ခုနှစ်မှာ)
၀မ်းရောဂါ Cholera ကိုဖြစ်စေတဲ့ပိုးကို (၁၈၈၃ ခုနှစ်မှာ)
ဒီလိုဆက်တိုက် ရှာတွေ့ခဲ့တာ။ Anthrax ကတော့ ဒေါင့်သန်းရောဂါ ခေါ်တယ်။ ကျွဲ၊ နွားတွေမှာဖြစ်ပြီး လူကို ကူးတဲ့ရောဂါတစ်မျိုးပဲ။"
“ တွေ့တာနဲ့ပျောက်အောင် ကုနိုင်တာနဲ့ နှစ်ပေါင်း ၅၀ တောင် ကြာသလား ဦးလေးရ။ ကျနော့်ကို ရှင်းပြပါဦး”
“ ဟာ ငါ့တူကလည်း။ ဒီပိုးကြောင့် ဒီရောဂါဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတာကို အပ်ကျမတ်ကျပြောဖို့က ပထမဆုံးလုပ်ရမှာလေကွာ။ ဘာအကောင်၊ ဘာပိုးမှန်းမသိပဲ အဲဒီပိုးကို ဘယ်လိုသတ်နိုင်မလဲကွ။ ခက်ခက်ခဲခဲရှာရတာပါ။ အဲဒီပိုးတွေ ဘယ်လိုဆိုတာကို မှန်ဘီလူးအောက်မှာမြင်အောင် ကြည့်ရသေး တာ။ ပြီးတော့မှ အဲဒီပိုးတွေကို မွေးကြရသေးတာ။ အဲဒီပိုးနဲ့ အဲဒီရောဂါနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်မှု ရှိမရှိ သေချာအောင်စမ်းသပ်ကြည့်ရသေးတာ။ အားလုံးသေချာမှ တထစ်ချကောက်ချက်ချရတဲ့ နည်းစနစ်မျိုးကွ။ ရောဘတ်ကော့က အဲဒီရောဂါ သုံးမျိုးဖြစ်စေတဲ့ ပိုးတွေကို အဲဒီလိုရှာတွေ့ခဲ့တာ။ ၀မ်းရောဂါဆိုရင် သူနေတဲ့ဂျာမနီမှာ အဖြစ်နည်း၊ အတွေ့နည်းလို့ ဖော ဖောသီသီတွေ့ရတဲ့ အိန္ဒိယအထိကို လိုက်ပြီးလေ့လာရှာဖွေရတာ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း လူတွေရဲ့အသက်ကို ကယ်နိုင်ခဲ့တာပေါ့။ သူ့ကိုဂုဏ်ပြုပြီးတော့လည်း တစ်ကမ္ဘာလုံး တံဆိပ်ခေါင်းတွေ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဝေေ၀ဆာဆာထုတ်ခဲ့ကြတယ်ကွ။ အခု ငါ့တူကို ဦးလေပြဖို့ စိတ်ကူးထားတာ ဒီမှာ ကြည့်။"
(Dr Rober Koch (1843 - 1910) အတွက် နှစ်ပတ်လည်နေ့များတွင် ဂုဏ်ပြုထုတ်ဝေသော တံဆိပ်ခေါင်းများ)
1944 Germany အာဏာရှင် ဟစ်တလာလက်ထက်
၁၉၅၃ - ဘယ်လဂျီယန်
၁၉၆၀ - ဂျာမဏီ
၁၉၆၁ - ရုရှား
၁၉၉၃ - ကျူးဘား
(တီဘီပိုးတွေ့ရှိခြင်း နှစ် ၁၀၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတကာက ထုတ်ဝေသော တံဆိပ်ခေါင်းများ)
"ကြည့်ရတာ အားပါးတရပါပဲ ဦးလေးရာ။ ကျတော်တို့ဆီက တစ်ခုမှမပါတာကိုတော့ သိပ်ပြီးဘ၀င် မကျဘူး။ ဦးလေး အရင်က ထပ်ခါတလဲလဲပြောဖူးသလိုပါပဲ။ အစိုးရတွေ အဆက်ဆက်၊ နယ်ပယ်နေရာ အတော်များများမှာ နိုင်ငံတကာနဲ့ ရင်ဘောင်မတမ်းနိုင်ပဲ ကျတော်တို့တွေ နောက်မှာကျန်နေခဲ့ကြတာ မဟုတ်လား”
“ ဟေ့ အချိန်ရှိပါသေးတယ်ကွ။ ခု ထ လုပ်ရင် ခုဖြစ်ပါတယ်။ အားမလျော့စမ်းပါနဲ့။ ဒါပေမဲ့ ကြိတ်နှုံး ကိုတော့ တင်ထားမှဖြစ်မှာနော်”
"ဟုတ်ကဲ့ပါ ဦးလေး။ ဒါနဲ့ ဒီအမှတ်အသားလေးက ဘာလေးလဲဟင်၊ ဒီတံဆိပ်ခေါင်းတွေပေါ်မှာ ခဏခဏတွေ့နေရလို့။ အဲဒါလေးလည်း ရှင်းပြပါဦး”
(Double Barred Cross - တန်း ၂ တန်းပါ လက်ဝါးကပ်တိုင်)
(တီဘီနှင့် အဆုတ်ရောဂါများ တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့)
"အော်ဒီ Logo (လိုဂို) ကလေးကတော့ တီဘီနဲ့ အဆုတ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် တီထွင် ထားတဲ့နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု သုံးစွဲနေတဲ့အမှတ်အသားကလေး ပါကွာ။ လက်ဝါးကပ်တိုင် ကို တန်း၂တန်း ထည့်ထားတာလေ။ နောက်တစ်ခု ဒီနေရာမှာ ဦးလေးပြောချင်တာလေးတစ်ခုရှိတယ်ကွ။ မင်း ဒီတံဆိပ်ခေါင်းတွေကို သေသေချာချာကြည့်ရင် ရောဘတ်ကော့ရဲ့မူရင်းဓာတ်ပုံတွေမှာ အဖြူအမည်း ပုံတွေကိုပဲ များသောအားဖြင့်သုံးကြတယ်ကွ။ နဂိုရှိရင်းပုံကို သူ့အတိုင်းမပြောင်းလဲပဲ သုံးကြတယ်။ သမိုင်းအရ တန်ဖိုးထားရမယ့်ပုံတွေကို မူရင်းအဖြူအမည်းနဲ့ပဲ တလေးတစားဂုဏ်ပြု ဖော်ပြလေ့ရှိကြတယ်ကွ။"
“ဟုတ်တယ်နော် ဦးလေး။ ဦးလေးပြောမှ ကျတော်သတိထားမိတယ်။ အခုခေတ်မှာ အဖြူအမည်းနဲ့ ရိုက်တဲ့ ဂျူးလူမျိုးတွေအကြောင်း ရုပ်ရှင်ကားဟာလေ . . . “
"Schindler’s List (ရှင်းဒလားလစ်)ပေါ့ကွ။ သမိုင်းတန်ဖိုးထားချင်လို့။ ကြောင်ကြောင်ကျားကျားအ ရောင်တွေမပါဘဲ တမင်တကာကို အဖြူအမည်း (Black & White) ရိုက်ပြလိုက်တာကွ။ ဦးလေးဆိုလိုခ ချင်တာက လေးလေးနက်နက်ခန့်ခန့်ထည်ထည်ဖြစ်စေချင်ရင် မူရင်းပုံကိုသုံးပါ။ မူရင်းအရောင်အတိုင်း ထားပါ။ ထိန်းသိမ်းထားပါ။ အဲဒါကိုပြောချင်တာပေါ့ကွာ။ တခြားပြင်ပမီဒီယာတွေ၊ စာစောင်ဂျာနယ်တွေ ကတော့ သူတို့စိတ်ကူးတည့်ရာ၊ သင့်တော်ရာအရောင်တွေ ထပ်သွင်းထပ်ဖြည့်ခြယ်သ ရိုက်နှိပ်ထုတ် ဝေကြမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အစိုးရကဦးဆောင်ပြီး ခန့်ခန့်ညားညားထုတ်ဝေရမယ့် တံဆိပ်ခေါင်းထုတ်တာမျိုး ကျတော့ ပိုကျက်သရေရှိအောင် မူရင်းပုံတွေ၊ မူရင်းအရောင်တွေသုံးရင် ပိုကောင်းတာပေါ့ကွာ”
For the record Tin Zaw Lwin